ဝန်ဆောင်မှုမပါပဲ iPhone? ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုကြိုးစားပါ အိုင်ဖုန်းသတင်း
ဝန်ဆောင်မှုမပါပဲ iPhone? ဒီဖြေရှင်းချက်များကိုစမ်းကြည့်ပါ
ပါပလော Aparicio | | အိုင်ဖုန်းဆိပ်ကမ်းများ, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများသည်အလွန်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသဖြင့်၎င်းတို့သည်တယ်လီဖုန်းများဖြစ်ကြောင်းတစ်ခါတစ်ရံမေ့သွားကြသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်ဖုန်းဖြင့်ဖုန်းမဆက်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်နှင့်လည်း ချိတ်ဆက်၍ မရနိုင်ပါကအကြောင်းရင်းကြောင့်မဟုတ်လျှင်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ဖုံးလွှမ်းမှုဆုံးရှုံးသွားမည်ကိုကျွန်ုပ်မစိုးရိမ်ပါ။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှဆက်သွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူမှငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ The iPhone ကို အချို့ရှိနိုင်သည် လွှမ်းခြုံပြproblemsနာများ အရာ၏ကျနော်တို့ကဒီ post အတွက်ပြောဆိုလိမ့်မယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ဤဆောင်းပါးကိုလှုံ့ဆော်ပေးသော iPhone များကဲ့သို့လွှမ်းခြုံမှုပြproblemsနာများကြုံတွေ့ဖူးသူမည်သူမဆိုကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်မသိပါ။ သို့သော်ထူးခြားသည့်ဖုန်းတစ်လုံးကို SIM ကဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုပေါ် မူတည်၍ အိုင်ဖုန်းမှအချက်ပြမှုပျောက်ဆုံးနေသောထူးဆန်းသည့်ဖြစ်ရပ်များကိုသတင်းပို့သည်။ ဒီပျက်ကွက်ကြုံတွေ့သည်အဘယ်ကြောင့်အဖြစ်နိဂုံးချုပ်။ ငါမှတ်မိတဲ့အရာ ပြaနာတစ်ခုရှိတယ်လို့ Apple ကတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိပါဘူး iPhone စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ၊ ဒါကြောင့် iPhone မျက်နှာပြင်မှာ "၀ န်ဆောင်မှုမရှိ" တဲ့စာရရင်သင်လုပ်နိုင်တာကိုအောက်မှာရှင်းပြပါမယ်
1 မင်းရဲ့ iPhone ဖုံးလွှမ်းမှုပျောက်သွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲ
1.1 SIM အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါ
1.2 SIM အကွက်၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါ
1.3 carrier သို့မဟုတ် iOS ဆက်တင်များကိုမွမ်းမံပါ
မင်းရဲ့ iPhone ဖုံးလွှမ်းမှုပျောက်သွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲ
ပထမဆုံးလုပ်နိုင်တာက SIM ရဲ့ status ကိုစစ်ဆေးဖို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကအထူးကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှားနိုင်ပါသည်။ SIM ကဒ်သည်အခြေအနေကောင်း၊ မသင့်ကိုစစ်ဆေးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် အခြားအိုင်ဖုန်းဖြင့်စမ်းကြည့်ပါ။ အကယ်၍ ကဒ်သည် iPhone အသစ်တွင်အလုပ်လုပ်ပါက၎င်းသည်အဆင်ပြေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ အမှားများကိုအခြားနေရာများတွင်ရှာရမည်။
ဒုတိယက iPhone မှာလည်းပြproblemနာရှိနေလို့ကဒ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသေချာစေချင်တယ် ကျနော်တို့ကအခြား devices များပေါ်တွင်စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာ iPhone6(သို့) Apple နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့တခြားစမတ်ဖုန်းတွေလိုပဲ။
SIM ကဒ်အကွက်ပျက်စီးပြီလား။ မီလီမီတာဆယ်ပုံတစ်ပုံ၏ပုံသဏ္ayာန်ပျက်ယွင်းသွားနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကအဆင်သင့်ဖြစ်ရန်စစ်ဆေးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အခြား iPhone မှာသုံးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ အိုင်ဖုန်းရှိသူတစ် ဦး ဦး ကို SIM ကဒ်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်မှာအကောင်းဆုံးမှာသူတို့သိသည့် SIM နှင့်သူတို့၏အိုင်ဖုန်းတွင်စမ်းကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းအလုပ်မလုပ်ပါကပြtheနာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ SIM tray ထဲတွင်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
carrier သို့မဟုတ် iOS ဆက်တင်များကိုမွမ်းမံပါ
ဆက်သွယ်မှုကောင်းတစ်ခုရရှိရန်အမြဲတမ်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ အော်ပရေတာဆက်တင်များသည်အမည်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းအော်ပရေတာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုပြုလုပ်သည့်အခါအော်ပရေတာက၎င်းကိုဆက်တင်အသစ်များစတင်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကို iTunes နှင့်ဆက်သွယ်သောအခါပေါ်လာလိမ့်မည်.
အထက်ပါအချက်များကိုရှင်းပြပြီးရင် iPhone သို့မဟုတ်အခြား iPhone များမှာလွှမ်းခြုံမှုပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ device ကို iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး update မရရှိနိုင်လားစစ်ဆေးပါ။ အော်ပရေတာဆက်တင်အသစ်များကိုထည့်ပါ။ ရရှိနိုင်သည့် update သည် iOS ၏ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်ပါကသင်၏ system ကိုနောက်ဆုံးအခြေအနေအဖြစ်ထားရန်အမြဲတမ်းကောင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် update ကို install လုပ်သင့်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးပြုလုပ်သင့်သည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုအော်ပရေတာများမည်မျှသုံးစွဲသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမူးဝြေခင်းနှင့်ဖုန်းကိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်ပင်စွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းအဆုံးတွင်နီးပါးတင်လိုက်သည်။ နှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြproblemsနာများ၏တရားခံကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်ပရေတာဖြစ်ပါတယ်.
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အော်ပရေတာကထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ် ကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး perfectlyုံခိုင်လုံသောဖြေရှင်းချက်ပေးနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤဖြေရှင်းချက်တွင် SIM ကဒ်အပြောင်းအလဲပါ ၀ င်သည်။ အကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မရှင်းပြနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်းတို့အားတရားခံများဖြစ်ကြောင်းပြသရန်ခဲယဉ်းသော်လည်းအချို့သောပြproblemနာတစ်ခုကြောင့်သို့မဟုတ် ၄ င်းတို့လွှမ်းခြုံထားခြင်းမရှိသောကြောင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောinရိယာတွင်တည်ငြိမ်သည်။
ကြီးစွာသောဘေးကြီးစွာသောကုစား။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာကိုကြိုးစားပြီးပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သည်အော်ပရေတာ X နှင့်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်လိမ့်မည်။ ဖြေရှင်းချက်မှာရိုးရှင်းသည်။ အကယ်၍ အော်ပရေတာ X ၏စျေးနှုန်းသည်ကျိုးနပ်ပါက၊ ဖြေရှင်းနည်းမှာကောင်းမွန်သောလွှမ်းခြုံမှုရှိသောအော်ပရေတာကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည် ကျနော်တို့ပြောင်းဘယ်မှာareaရိယာ၌တည်၏။ စျေးနှုန်းအတူတူပင်လျှင်အဘယ်ကြောင့်ခံရသနည်း တကယ်တော့ငါအော်ပရေတာကိုမပြောင်းလဲပေမဲ့အော်ပရေတာကပြောင်းလဲလိုက်တယ်။ အမြန်နှုန်းနိမ့်တဲ့ပြproblemsနာတွေစတင်ခဲ့တယ်။ အော်ပရေတာကသူပေးတဲ့အော်ပရေတာနဲ့သူရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်၊ ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါငါ့အမြန်ဆက်သွယ်မှုကိုမြှောက်လိုက်တယ်။ 10, ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးအတွက်ငါ status bar မှာ 3G သင်္ကေတကိုမြင်တော်မူ၏။
သင့် iPhone ၏လွှမ်းခြုံမှုပြproblemsနာများကိုသင်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီလား။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ဆက်ထားခြင်းလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းဆိပ်ကမ်းများ » ဝန်ဆောင်မှုမပါပဲ iPhone? ဒီဖြေရှင်းချက်များကိုစမ်းကြည့်ပါ
Mercedes cinelli ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ iPhone သည်ကျွန်ုပ်ကို ၀ င်ခွင့်မပြုခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်၏အိုင်ဒီနှင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ရန်အခွင့်အလမ်း ပေး၍ ၎င်းသည်မမှားပါကြောင်းညွှန်ပြခဲ့သည်။ SOS
Mercedes Cinelli အားပြန်ပြောပါ
ဂျင်မီအိုင်ဗင်း - "အက်ပဲလ်ဂီတမှာပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးဖန်တီးဖို့ငါတို့ကြိုးစားခဲ့တယ်"
သင့်ရဲ့ iPhone နဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာငွေပေးချေနည်း